तीजपर्वमा क्यान्सर रोगबारे सचेतना |
तीजपर्वमा क्यान्सर रोगबारे सचेतना
प्रकाशित मिति :2016-08-28 12:19:51
चितवन । ‘महिला हक र अधिकारको क्षेत्र अभियानमा झन्डै डेढ दशक खर्चिएँ । धेरै जनचेतनामुलक कार्यक्रम पनि गरें । तर आफ्नै शरीर स्वस्थ राख्न भने सकिनँ ।
बेलैमा परिक्षण गरेको भए मलाई क्यान्सर जस्तो भयानक रोग लाग्ने नै थिएन ।’ अधिकारकर्मी अध्यक्ष बन्दना खाँडले भन्नुभयो ।उनकै संस्था परिचय र लायन्स क्लब अफ चौतारी भरतपुरले यस वर्षको हरितालिका तीजको अवसरमा स्तन तथा पाठेघरको क्यान्सर सम्बन्धि सचेतनामुलक कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । खाँडलाई क्यान्सर रोग लागेको एक वर्ष भयो ।
क्यान्सरकै विरामी भएपछि उपचारका क्रममा धरै खाले अनुभव संगालेकी उहाँले अनुभवलाई अभियान कै माध्यम बनाउने पहल गरेको बताउनुभयो । खाँडले भन्नुभयो ‘गतवर्ष जब मलाइ स्तन क्यान्सर भयो, उपचारको समयमा महिला साथीसँग निरन्तर भेटघाट, उहाँहरूको यस प्रतिको चिन्ता, कौतुहलता र विशेष गरी क्यान्सरका महिला बिरामीको अवस्था र उपचारकै दौरानमा बिरामीलाई गरेको सहयोगले पनि मलाई क्यान्सर सम्बन्धि चेतना र नियन्त्रण अभियान गर्न उत्प्रेरणा मिल्यो ।’
कार्यक्रममा जनचेतना र शिक्षाको अभावमा अझै पनि कतिपय महिला समयमै जाँच गर्न नजादा क्यान्सर रोगी बढेको डा. भोला सिवाकोटीले बताउनुभयो । महिलाको सानै उमेरमा विवाह हुने, धेरै सन्तान जन्माउने, पौष्टिक तत्वको कमीजस्ता कारणले पाठेघर तथा स्तनको क्यान्सर हुने सक्ने डा. शिवाकोटीको भनाई छ ।
क्यान्सर नियन्त्रण रोकथाम तथा अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. किशोर कुमार प्रधाङ्गनले क्यान्सर रोगले निम्त्याउने समस्या तथा रोकथामको विषयमा कार्यक्रममा जानकारी गराउनुभयो । शरीरमा भएको कोठीको आकार अस्वभाविक रुपमा बढेमा, गिर्खा तथा गांठागुठी देखा परेमा, कोठीबाट रगत निस्कने भएमा क्यान्सरको लक्षण हुन सक्ने भएकाले समयमै जाँच गराउनुपर्नेमा डा. प्रधाङ्गनको सुझाव थियो कार्यक्रममा स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. शारदा कुवँरले महिलाले लाजका कारण बेलैमा समस्या नबताउँदा विभिन्न खाले भयानक रोगको शिकार हुने गरेको औंल्याउनुभयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि स्थानिय विकास अधिकारी श्रवण कुमार पोख्रेलले नेपालमा क्यान्सर रोगीको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले क्यान्सर रोगको पत्ता लगाउने क्रममा पनि विरामीलाई मानसिक र शारिरक पीडा थपिने गरेको बताउँदै क्यान्सर रोग परिक्षणको प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपालमा धेरै मृत्युको कारणमध्ये क्यान्सर रोग तेस्रो नम्बरमा पर्ने गरेको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो । फोक्सो, पेट, कलेजो, महिलामा स्तन तथा पाठेघर क्यान्सर हुने गरेको र तीमध्ये २० प्रतिशत रोगी न्यून आय भएका मुलुकका हुने गरेको बताइएको छ ।